पादरीहरूद्वारा सयौँ बालबालिकाको यौनशोषण, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पादरीहरूद्वारा सयौँ बालबालिकाको यौनशोषण
बीबीसी । जर्मनीको रोमन क्याथलिक संस्थाले गरेको छानबिन प्रतिवेदनले ७० वर्षभित्र पादरीहरूबाट हजारौँ बालबालिका यौन हिंसामा परेको जनाएको छ।
जर्मनीका रोमन क्याथलिक पादरीहरूले सन् १९४६ देखि २०१४ सम्ममा कम्तीमा ३६ सय बालबालिकासँग यौनदुर्व्यवहार गरेको खुलेको छ।रोमन क्याथलिक गिर्जाघर आफैँले गरेको एउटा अध्ययनका क्रममा पादरीहरूले त्यस्तो निन्दनीय कार्य गरेको भेटिएको थियो। सेप्टेम्बर २५ तारिखमा सो अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताइएको थियो।
जर्मनीको रोमन क्याथलिक संस्थाले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा १,६७० पादरीहरूले ३,६७७ बालबालिकामाथि कुनै न कुनै खालको यौनजन्य हिंसा गरेको उल्लेख गरिएको छ। गिर्जाघरका प्रवक्ताले सो प्रतिवेदनले आफूहरूलाई निराशा र लज्जाबोध भएको बताएका छन्। विश्वभरि रोमन क्याथलिक इसाई पादरीहरू दशकौँदेखि यौनहिंसामा संलग्न भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुने क्रममा यो सबैभन्दा ताजा घटना भएको बताइएको छ।
अठतीस प्रतिशत आरोपितहरूमाथि मात्र अदालतमा मुद्धा चलाइएको र उनीहरूमध्ये धेरैलाई सामान्य अनुशासनसम्बन्धी कारबाही मात्र गरिएको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। हिंसाका छमध्ये एउटा घटना बलात्कारको रहेको छ।
हिंसामा परेकाहरूमध्ये अधिकांश १३ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालकहरू रहेका छन्। जर्मनीका २७ इसाई इकाइका ३८ हजार दस्तावेजहरूको सहयोगमा त्यहाँका तीनवटा विश्वविद्यालयले सो अध्ययन गरेका थिए।
केही दस्तावेजहरू नष्ट गरिएको र केहीमा परिवर्तन गरिएको पाइएको भन्दै अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरूले वास्तविक घटना र पीडितको सङ्ख्या अझै बढी हुनसक्ने बताएका छन्। जर्मन बिशप्स कन्फरेन्सका प्रवक्ता बिशप स्टेफान आकेर्मानले भने, कुन हदसम्म यौन हिंसा भएको रहेछ भन्ने कुरा अध्ययनबाट थाहा पाएका छौँ। हामी ज्यादै निराश भएका छौँ र हामीलाई लाज लागेको छ।
उनले गिर्जाघरभित्र हुने गरेका अनुचित कार्यहरू उजागर गर्न र त्यसबाट पीडितहरूको पक्षमा सो अध्ययन अघि बढाएको बताएका छन्। आफूहरूले अध्ययन गर्न नपाउँदै सो अध्ययनको प्रतिवेदनका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेको बिशपले बताए।
उनले पादरीहरूबाट हिंसामा परेका पीडितहरूलाई परामर्श दिने गिर्जाघरको योजनासमेत सुनाए।